Katatu Blog yako Traffic neVanoshanda Vanoshanya | Martech Zone
Katatu Blog yako Traffic ine Vanoshanda Vashanyi
Chitatu, June 1, 2011 Mugovera, October 29, 2011 Douglas Karr
Bob Burchfield anga ari wenguva yakareba shamwari uye mumwe wevakanaka kwazvo vakomana pano muIndipolis. Anouya kuzviitiko zvese zvemudunhu uye ane zvakanyanyisa Indianapolis zviitiko zvekarenda mudunhu kuAroundIndy.com. Bob akadonhedza tsamba iyi kwandiri nhasi:
Ini ndoda kugovana newe nezve diki blogging chirongwa chakatangisa kuenda mumwedzi wapfuura. Imwe yematunhu CVB's (kokorodzano uye mahofisi emahofisi) akabvunza kana vaigona kunyora blog yevaenzi yangu AroundIndy.com blog. Ini ndakaburitsa zuva nezuva (uye gare gare vhiki) kubva muna2008, asi handina kumboishandisa chero chinhu kunze kwekutanga gumi runyorwa rwezvinhu zvekuita muIndipolis yevhiki iri kuuya. Saka pandakawana ichi chikumbiro ndakafunga, wadii kuvhura iyo kumatunhu ese maCBB nenzvimbo dzenzvimbo? Saka ndakatumira kukoka kune vangangoita zana kuburikidza neemail. Zvinyorwa zvakatanga kuuya husiku humwe. Ndakatanga kutsikisa rimwe zuva nezuva, mangwanani ega ega na10 am, musi waMay 100.
Zvakanaka ……… ..
Kwevhiki yaMay 16-22, traffic pa blog yakanga yakwira 77.5% kubva svondo rapfuura. Kwevhiki yaMay 23-29, traffic yaive katatu vhiki rapfuura. Traffic muna Chivabvu 2011 yaive 128.6% yepamusoro kupfuura Chivabvu 2010. Iyo May 30 muenzi blog yakaisa a rimwe-zuva saiti traffic rekodhi, kukwira 79.1% kubva kune yapfuura-zuva rimwe kumusoro.
Chinhu chinonyanya kufadza kwandiri ndechekuti kana ndikanhonga keyphrase kubva kublog rega rega ndotsvaga neGoogle, zvinoratidzika pane peji rekutanga reGoogle mitsva yekutsvaga mukati meawa rekutumirwa.
Kufemerwa kwekuedza uku kwakauya kubva pakuverenga Corporate Kubhuroka kweDummies. Saka ndiri kungonyorera kuti "maita henyu" nerubatsiro rwese, kuraira, rutsigiro, neruzivo rwakanaka rwamakandiudza (nevadzidzi vangu) kubvira patakatanga kusangana kuSouthside Smoosiers (ndichiri kupotsa kuungana ikoko Mukombe weBean).
Bob Burchfield, Mupepeti
Kutenda kuna Bob nekutora nguva yekundinyorera. Ichi ndicho chikonzero takanyora bhuku! Tinoda kuti vanhu vakure chiremera chavo uye kukosha online nematanho anokwanisa, kuyerwa. Aya marudzi emaemail ndiwo anoisa kunyemwerera pachiso changu uye anondipa simba!
Social Media Equity uye Kudzoka paInvestment
Jun 1, 2011 pa 10: 18 PM
Ndinofanira kuverenga bhuku rako! Ndiri mutsva kublogi uye ndinoda rubatsiro rwese rwandinogona kuwana!
Jun 1, 2011 pa 10: 22 PM
Ive neshuwa yekusaina kusaina yedu tsamba, zvakare. Isu tinogovana matipi vhiki rega rega!
Jun 1, 2011 pa 10: 23 PM
Ndinofanira kuverenga bhuku rako! Ndiri mutsva kublogi.
Jun 1, 2011 pa 11: 14 PM
Ndinofunga ndinofanira kuiverenga zvakare.
Jun 2, 2011 pa12: 38AM
Valerie, iwe uri nyeredzi!